HomeSuuqa‘Di Maria Fool-xumo Darteed Ayay Real Isaga Iibisay’
Caawiyaha agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona ee Carles Rexach ayaa sheegay in kooxda Real Madrid u iibisay ciyaaryahan Angel Di Maria sababo la xidhiidha muuqaalkiisa iyo inaanu ahayn ‘qof muuqaal ahaan qurux u dhashay’.
Kadib markii uu Madrid ka caawiyey guusha horyaalka Yurub ee Champions League sanadkii tagey, xidiga xulka Argentina wuxuu u wareegay naadiga Manchester United oo siistay qiimihi ugu sareeyey ee koox Horyaalka England ahi ciyaaryahan siisato oo dhamaa €81.8 million laakiin ilaa hadda la daalaa dhacaya sidii uu ula qabsan lahaa kooxda tababare Louis van Gaal xili ciyaareedkani.
Waxaanu Rexach aaminsan yahay in Madrid danayso oo kaliya astaanteeda iyo muuqaalka naadiga taasina ay ahayd sababtii ugu weynayd ee ka dambeysay iibka ciyaaryahan Di Maria.
“Florentino Perez [madaxweynaha Madrid] wuxuu eegaa suuqa aduunka , waxaanu jecel yahay inuu haysto koox qof kasta ula muuqata mid weyn oo widh-widhaysa shaqsi kastaana caashaqo ama ka hello. Ma fahmaysaa waxaan ula jeedo?” ayuu Rexach ku yidhi waraysi uu siiyey warfidiyaha Regio7. cada
“[Cristiano] Ronaldo ayaa callanka u sida naadigaasi. Perez wuxuu iibinayaa astaan caalami ah.
“Vicente del Bosque iyo Di Maria aad bay u fool-fool xun yihiin mana aha ragii Real Madrid. Waa kuwo aan lahayn quruxda sida Toni Kroos iyo James Rodriguez oo kale.”
Neymar Iyo Costa Oo Lagu Daray Xulka Brazil Ee Ka Qayb-gelaya Ciyaaraha Olympic